Bolted Aluminium Lugs Manufacturers na Suppliers | China bolted Aluminium Lugs Factory
Jera akara kwesịrị ekwesị co., Ltd bụ emeputa nke CLB cable lugs maka ike Gịnị na-efefe n'elu ahịrị.
Anyị n'ibu bolted cable lugs (ndị ọzọ na-akpọ lugs njikọta) e mepụtara maka eletriki nkesa na ike e nke 1-36 kV.
Bolted cable lugs na-adabara aluminum na ọla kọpa na ọla kọpa Gịnị, nke dị iche iche nha na dị iche iche wiring owuwu dị ka tọrọ atọ eduzi, siri ike, gburugburu, na cable eduzi nha 4 300 mm2.
Jera nyochara a nnukwu dịgasị iche iche nke ala, ọkara na elu voltaji cable nkwonkwo, na dị iche iche na mgbakọ na usoro nke na-arụ ọrụ. Anyị emejuputa kacha adabara cable jointing ngwa maka nzube nke nchupu na njikọ nke nnyefe e. The ebe nke ojiji: commodities, ulo oru na-ewu, na ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ okporo ígwè e, eletriki jedebere igbe na cabinets, ala cable closures.
Anyị na-emepụta shiee isi cable lugs elu ike, corrosion eguzogide aluminum ihe, na tin plating. Ugboro abụọ torque zones nke aluminum bolts ekwe nkwa obi ike Ọdụdọ njikọ dị iche iche diameters nke Gịnị, na enweghị oké egwu na-eguzogide.
All eletriki USB lugs nwalere dị ka mba na EN 50483 ule chọrọ.
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị nwere ihe nkọwa, anyị ga-achọ na-enye gị ọtụtụ dechara ngwaahịa nso nke n'ibu aluminum cable lugs.
Anyị na-elekwasị anya na ahịa na aluminum cable lugs nwere ike ju dị ka gị chọrọ ka gị eletriki nkesa njikọ pụrụ ịdabere.
Shea isi bolt lug CLBV 25-50
Shea isi bolt lug CLB 10-25
Shea isi bolt lug CLBV 120-300
Shea isi bolt lug CLB 25-50
Shea isi bolt lug CLB 35-150
Shea isi bolt lug CLB 150-240
Shea isi bolt lug CLB 70-120
Shea isi bolt lug CLBV 150-240
Shea isi bolt lug CLB 4-35